Maxay Somaliya uga dhigan tahay heshiiskii Sacuudiga iyo Qatar? - Awdinle Online
Maxay Somaliya uga dhigan tahay heshiiskii Sacuudiga iyo Qatar?
Somaliya ayaa sanadkii 2017-kii sheegtay in ay dhexdhexaad ka tahay xiisaddii siyaasadeed ee xilligaa soo kala dhexgashay Dowladaha Sacuudiga, Emirate-ka, Bahrain iyo Masar oo dhinac ah iyo Dowladda Qatar oo dhinaca kale ahayd.
Somaliya ayaa Qatar u ogolaatay in diyaaradaheeda ay isticmaalaan hawada dalkeeda, bacdamaa dhul, bad iyo cirba laga go’doomiyay Xukuumadda Doha.
Dowladihii ay xurgufta kala dhaxeysay Qatar ayaa Somaliya ku eedeeyay inay hal dhinac la safatay, waxayna cadaadis ku saareen sidii ay mowqifkeeda uga noqon laheyd, inkastoo ay ka gows adeegtay.
Dr. Axmed Sheekh Maxamed (Axmed Tiir) oo fallanqeeya arrimaha dunida Islaamka, waxna laga weydiiyay waxa Somaliya uu uga dhigan yahay heshiiska ay dowladahaasi gaareen ayaa sheegay inaanay jirn wax la yiraahdo dhexdhexaad.
“Horta siyaasadda dhexdhexaad wax la yiraahdo badi ma jirto, ninka meel uun buu jiraa, hawadaada iyo caadifadaada meel bay jirtaa, meel baa cilaaqaad la leedahay. Saxiixa qaraarka waad dhihi kartaa aniga dhexdhexaadaa ahay, laakiin runta haddii la sheego Somaliya waxay cilaaqaad weyn la laheyd, marna aanan hoos u dhicin Dowladda Qatar oo u ogolaatay hawada Qatar, haddii laga soo xiro Somaliya hawo aanan ahayn maynaan haysan. Marka Qatar waxay aad ugu dadaashay Somaliya inay gacanta ku hayso, oo ay cilaaqaad hoose la yeelato.” Ayuu yiri Dr. Axmed Sheekh Maxamed.
Axmed Tiir oo la hadlay BBC ayaa yiri “Nimanka Carabta dabeecadooda haddii ay heshiiyaan adiga dhexda uun bay kaaga taggi, hadda Somaliya waxaa u taalo laba arrin oo aad u muhiim u ah, si ay arrimahaan uga xeeladeysato.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Waa midda (1aad) Somaliya waxaa lagu tirinayaa markaan dhab u hadalno inay Qatar garab istaagtay, waxaana loo baahan yahay dowladihii ee eedda ka tirsanaayay Somaliya ku eedeynayay inay Qatar la safatay, sidii cilaaqaad diblomaasi oo xoog leh ay ula samayn laheyd ayna u tusi laheyd inay tahay dowlad dhexdhexaadnimadeeda ay sheeganeyso ay ugu cadayn laheyd inay ahayd dhexdhexaad. Waa midda 2aad Dowladda Qatar dabcan baahida badan ay Somaliya u qabto, markii hawada iyo dhulka loo furo way ka yaraan doontaa, marka waxaa yaraan doono ahmiyadda badan ay Somaliya siin doonto. Marka waxay u baahan tahay Somaliya inay gacmaha u furto dowladaha kale ee miisaanka weyn leh ee Carabta, sida Sacuudiga, Emirate-ka iyo dowladaha lamida, oo ay diblomaasiyo sameyso si ay cilaaqaad ula soo ceshato dowladahaas, oo hadda ku eedeynayo inay dhinac la safatay.”
Previous articleAl-Shabaab oo qaraxyo ku burburiyay Ceel-Biyood
Next articleDowladaha Masar iyo Qatar oo heshiis kala saxiixday